Dhageyso:-DFS oo faah faahisey heshiis ay la gashay Shirkado Caalami ah | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhageyso:-DFS oo faah faahisey heshiis ay la gashay Shirkado Caalami ah
Dhageyso:-DFS oo faah faahisey heshiis ay la gashay Shirkado Caalami ah
Wasiirka Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka ee Xukuumadda Soomaaliya Cabdi Rashiid Maxamed Axmed ayaa faah faahin guud waxaa uu ka bixiyey heshiis ay Wasaaradiisu la gashay Shirkadaha shidaalka Baara ee Shell-Exxon & Mobile.
Wasiirka oo la hadlay BBC-da waxaa uu sheegay in heshiiskaan labada Shirkadood uu soo bilaawdey dowladii Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre,isla markaana uu dhigayay in Shidaalka laga baaro laga soo bilaabo deegaanada Puntland iyo Magaalada Marka,isla markaana dowladda Federaalka ay daba joogto heshiiskaas.
“Labada shirkadood heshiiskii horey dowladii Siyaad Barre ula gashay ayaan daba soconaa waxaana ka dalbaney inay cadeeyaan waana cadeeyeen,waxayna Bishii June ee sanadkii hore ay bixiyeen kiradii lagu lahaa,sidoo kale Madaxda Shirkadahaas ayaan kula kulmey london,waxaana gaarney heshiis isfaham anaga oo sameysanay Roadmap ayuu yiri”Wasiirka.
Wasiirka ayaa wax laga weeydiiyey sida ay suurtagal ku noqon karto inay Shidaal ka baaraan Soomaaliya maadaama xaalado amni darro ay ka jiraan,waxaana uu sheegay in ay tixraacayaan heshiisyadii hore oo ay la galeen dowladihii ka horeeyey qorsho guud oo ay kula heshiiyeene uu jiro.
8-dii Bishii Febaaro ee sanadkaan ayaa Madaxweynaha Soomaaliya uu saxiixey Sharciga Batroolka,kaas oo ay ansixiyeen Baarlamaanka labada Aqal,hayeeshee waxaa Sharcigaas ka hor-yimid Maamulada Puntland & Jubbaland oo khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyo Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Previous articleDhageyso:-Puntland oo sheegtay inay dacwad ku oogeyso Ganacsato
Next articleDhageyso:-Taliye Xuseen “Wixii DFS ay bixineyso Puntland ha soo mariso”